Fariña. History na indiscreces nke ahịa ọgwụ ọjọọ na Galicia | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Ule, Ndị edemede, Akwụkwọ
Akwụkwọ nke Fariña. History na indiscre nke ahia ọgwụ ọjọọ na Galicia, bụ otu n'ime isiokwu ndị na-ese okwu na afọ ndị na-adịbeghị anya na Spain. Karịsịa mgbe enyere iwu ụlọ ikpe na Machị 2018 nke nyere iwu ịkwụsị azụmahịa ya. Ihe kpatara ya: ebubo ebubo nke ịsọpụrụ otu n'ime ndị a kpọtụrụ aha na ederede.
Ka o sina dị, akagburu onyinye ahụ ọnwa anọ ka e mesịrị. N'ezie, ikpe nyere aka (n'ihu) bulie ihe ịga nke ọma nke isiokwu nke Farina, karịrị mkpụrụ 100.000 e rere ruo taa. N'otu aka ahụ, akwụkwọ a nke onye odeakụkọ Spanish Nacho Carretero bụ ntọala nke atụmatụ nke usoro ahụ Farina, nke Movistar Plus kwalitere na Septemba 2019.
1.1 Ọnọdụ iwu nke akwụkwọ Fariña
2 Ọnọdụ akụkọ ihe mere eme nke izu ahia na Galicia
2.1 "Zọ ndụ “ziri ezi”
3 Akwụkwọ Fariña gosipụtara nsogbu ọdịnala
3.1 Nduhie onwe
3.2 "Sicily ọhụrụ"
3.3 Akwụkwọ akụkọ kachasị elu
4 Oku siri ike maka ilebara anya na obodo Spanish
Nacho Carretero (A Coruña, 1981) bụ onye nta akụkọ na onye edemede nwere ogologo ọrụ. Ewezuga nyocha ya banyere ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ na Galicia, Carretero emechaala akụkọ na-awụ akpata oyi n'ahụ banyere mgbukpọ agbụrụ na Rwanda, Ebola na Africa, agha obodo Syria na oke ọhịa na Galicia n'oge 2017.
Ọnọdụ iwu nke akwụkwọ Fariña
N’agbata Machị na Juun 2018, “ịtọrọ mmadụ na nchekwa” nke ọka ikpe Alejandra Fontana nyere iwu ka dị, site na arịrịọ nke José Alfredo Bea Gondar, onye bụbu onyeisi obodo O Grove (Pontevedra). Usoro ahụ bụ akụkụ nke ikpe ya megide Nacho Carretero na ụlọ ọrụ Libros del KO. Ọzọkwa, onye gbara akwụkwọ ahụ kwuru na ọ ga-akwụ ụgwọ nke € 500.000, nke na-eyi egwu nlanarị nke onye mbipụta ya.
Otú ọ dị, Na June 22, 2018, Courtlọikpe Ọchịchị nke Madrid kagburu ịkwụsị azụmahịa ahụ. Ihe ọ bụla merenụ n'akwụkwọ a ga-abụ arụmụka na iru ala. Okwu ahụ bụ "fariña" pụtara "ntụ ọka" na Galician (otu n'ime ụzọ nnabata iji zoo cocaine). Ihe mkpuchi ahụ bụkwa nkwupụta nke ebumnuche: ọ na-eme ka ngwugwu ọgwụ mepere emepe.
Akwụkwọ ndị ọzọ nke Nacho Carretero (wepụtara na 2018):
O di anyi nma (Libros del KO), ebe ọ na-eme nyocha akụkọ ihe mere eme na-ekwu okwu banyere egwuregwu na nsogbu ụlọ ọrụ nke Deportivo de La Coruña.
Na ọnwụ ọnwụ (Editorial Espasa), na-ekwu maka okwu Pablo Ibar, onye Spain a mara ikpe ọnwụ na United States na 2000. Mana na 2016 Courtlọikpe Kasị Elu nke Florida kwubiri na ya enweghị ikpe ziri ezi, ya bụ, a ga-emegharị ya ọzọ.
Ọnọdụ akụkọ ihe mere eme nke izu ahia na Galicia
Ọtụtụ zoro ezo enclaves, mgbagwoju anya waterways na nooks, ka Galicia mpaghara dị mma maka ndị otu na-ebubata ego na-aga nke ọma. Onye omekome ọ bụla nwere ihe ọmụma zuru ezu banyere mpaghara ahụ nwere ezigbo ohere ịzobe ma gbanahụ. Na nke a, Carretero dechara usoro ọmarịcha usoro oge ochie na ọdịnala guzobere ọtụtụ narị afọ.
"Zọ ndụ “ziri ezi”
Nleghara anya nke ndị gọọmentị etiti gọọmentị emeela ka ọnọdụ “ụgwọ” mmekọrịta mmadụ na ibe ya zuru oke maka ịbata na mba ọzọ. N'ihi nke a, ahia - obughi nani ogwu a machibidoro - ka elebara anya nke oma na oke osimiri Galician. A na-ahụta ya dịka usoro ọzọ iji nweta ego.
Ndị ahụ metụtara so na-egosi na ihe ha mere ziri ezi site n'ikwu na "ọrụ ha adịghị emerụ onye ọ bụla". Ha na-atụle ibanye dị ka "ruble" nke na-eme ka akụ na ụba ndị ọzọ, "ọtụtụ azụmaahịa, itinyekwu ego, ọrụ ndị ọzọ maka mmadụ niile". Ya mere, okporo ụzọ nke malitere na igwe na etiti narị afọ nke 70 wee gaa n'ihu na ụtaba na 80s, dugara ọgwụ n'oge 90s na XNUMXs.
Akwụkwọ nke Farina na-egosi nsogbu ọdịbendị
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Farina
"Okporo ụzọ anaghị emetụta ndị obodo" bụ ahịrịokwu ekwugoro iji kpuchie ọdachi ndị ọzọ. Ọ bụ mgbaghara e guzobere na mba ebe a na-akụkarị ma na-arụkwa osisi dị ka akwụkwọ coca ma ọ bụ wii wii.. N'oge a, akaebe sitere n'aka ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ na Galicia dị ezigbo mkpa.
Site na ịbanye na nsogbu nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na mpaghara ahụ, Carretero kpochapuru echiche ụgha nke "oriri na-eme n'ebe ọzọ". Mana ngọpụ ụkwụ dị mkpụmkpụ abụghị naanị njikọ na mba ndị na-emepụta ọgwụ. Njikọ ndị Cartels South America-ọkachasị nke Pablo Escobar's siri ike.
O doro anya, nguzobe ezi netwoki ahia ahia na-achu amaghi na / ma obu nkwekorita nke ndi ochichi. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị uwe ojii, ndị agha ... nke ka ukwuu ma ọ bụ nke pere mpe, ha niile nwere oke ọrụ ha. Ma ọ bụghị ya, ezinụlọ ndị omekome agaraghị enwe ebe. Kedu ihe ọzọ, Carretero anaghị ewepụ ọha mmadụ Galizia dịka akụkụ nke nsogbu ahụ.
Nkwupụta nke Nacho Carretero. na Fariña.
Ya mere, nchoputa a mechara wepu uzo obula na ahia ogwu na Galicia. Mgbe ahụ, ọtụtụ, ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị ntaramahụhụ bịara "gbasasịa". N'ezie, ikpe a natara bụ "ihe nkịtị" na-arụpụta; O yikarịrị ka ndị ọzọ agaghị apụta n'ọdịnihu dị anya.
Akwụkwọ akụkọ kachasị elu
Carretero (na onye nkwusa a) egosila obi ike ha site n'ịrụ ọrụ dị oke egwu dịka ọ dị mkpa. En Farina nkwupụta nke capos, ndị uwe ojii, ndị ikpe, ndị nta akụkọ na ndị bi n'obodo ahụ gosipụtara nke na-egosi ịdịgide adịgide nke ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ ruo taa.
N'aka nke ọzọ, ozi ahụ gosipụtara nke ọma n'emeghị atụmatụ, nke na-eme ka nghọta nke ịdị ukwuu nke okporo ụzọ ahụ dị n'akụkụ ya. Ọzọkwa, lhe infographic na-enye data a pụrụ ịdabere na ya banyere ezinụlọ, ụzọ, na ụzọ njem. Karịsịa ihe na-adọrọ mmasị bụ nkọwapụta nke macro-gliders ndị a na-ebugharị ibu na gafee estuaries.
Oku siri ike maka ilebara anya na obodo Spanish
Medialọ ọrụ mgbasa ozi ọdịyo ahụ nwere ikpe mara oke maka imepụta ọmịiko n'ebe ndị Mexico na ndị Colombia na-azụ ahịa ọgwụ ọjọọ nọ. Taa, na netwọk dị ka Netflix ma ọ bụ Fox, usoro telivishọn gbadoro anya na ndị a bụ ihe a na-ahụkarị ma na-aga nke ọma. N'ihi ya, Carretero na-eme ka o doo anya na mmasị ndị mmadụ nwere maka ahịa ahịa ọgwụ bụ nnukwu nsogbu.
Ndị Spain na-ewerekarị akụkọ banyere esemokwu ọgbaghara n'etiti ndị omempụ dị ka okwu mba ọzọ.. Otu ihe a na - eme na ọnụọgụ oriri na - eyi egwu. Mgbe eziokwu dị ezigbo iche, "ha nwere anụ ọhịa ahụ n'ụlọ." Na mgbakwunye, ọ metụtara ọtụtụ nsogbu dị ka ịzụ ahịa mmadụ, nrụrụ aka na mmebi nke ọha mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Ule » Akwụkwọ Fariña
Johanna Lindsey Akwụkwọ
José Ramón Gómez Cabezas: «Imeri onye na-agụ ya bụ ịrị Everest»